Maaskaro ilaalin ah waxaa ka mid ah maaskaro maalinle ah oo ilaalin iyo maaskaro ilaalin caafimaad
Maaskaro ilaalin maalinle ah
Maaskarada maaskaro ee maaskaro maalin kasta ilaalinaysa ayaa laga sameeyay sheyga shaandhada leh. Maaskaro maalin kasta ilaalinaysa ayaa inta badan loo qaybiyaa maaskaro boodhka ah iyo maaskaro ka hortagga fayraska.
Maaskaraha ciiddu waxay leeyihiin difaac ka ilaaliya boodhka waxyeelada leh ee hawada. Mawduucyada boodhka leh ee ciidda leh ayaa guud ahaan koob-qaabeeya, kaas oo ku habboon kara afka iyo sanka si wax ku ool ah si loo gaaro saamaynta kahortagga boodhka. Maaskaro wasakh ah ayaa badanaa loo isticmaalaa sidii loo xakameyn lahaa siigada iyo gaaska wasakhda ah, laakiin ma kala shaandhayn karaan jeermiga.
Maaskaro ka hortaga fayraska ayaa ah qalabka ka ilaalinaya neefsashada ee loo isticmaalo ka ilaalinta xubnaha neefsashada wakiilada dagaal sunta ah sunta iyo boodhka shucaaca.
Wajiga maaskaro daboolida caafimaadku wuxuu u qaybsan yahay lakab gudaha, dhexe iyo sare. Lakabka gudaha waa faashad nadiif ah oo caadi ah iyo maro aan dhogor lahayn. Lakabka dhexe waa lakabka polypropylene fiber dhalaalaya oo aad ufiican. Lakabka sare waa dhar aan la-gooynin iyo polypropylene-dhuuban oo khafiif ah ayaa dhalaalaya lakabka maaddada.
Waa heer sare biyo-baxa iyo neefsashada. Waxay saameyn weyn ku leedahay shaandhaynta fayraska hawada yar yar iyo boodhka qumman ee waxyeelada leh. Saamaynta shaandhaynta guud ayaa fiican, oo waxyaalaha la isticmaalayna waa sun aan sun lahayn oo aan dhib lahayn.
Waxay ka hortegi kartaa infekshannada ay sababaan dhumucda hawada ee 5 μ 5 agentmg oo jeermis dilaac ah iyo xiriir aad ugu dhowaansho ah oo ka dhasha cudurrada dilaaca. Shaandhaynta walxaha walxaha maaskarada ayaa ka yar 95%, heerka ilaalinta ayaa sarreeya.
Maqaarka mashiinka difaaca waxaa loo isticmaalaa inuu jirka bini’aadamka ka ilaaliyo waxyaabaha ka dilaaca hawada, ilaalinta shaqaalaha caafimaadka meelaha cudurada faafa, ilaalinta shaqaalaha sheybaarka viruska, ilaalinta noocyada kala duwan ee shaqaalaha inta lagu jiro cudurada faafa, sunta kiimikada, shaqaalaha miinada, shaqaalaha xasaasiyadda manka, iwm.